Noho ny faritra iray fitrandrahana solika, mihamafy ny ady tany ifanaovan’i Goiàna sy Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Ny didy fanelanelanana tamin'ny 1899 milaza fa an'i Goiàna ilay faritra
Voadika ny 27 Janoary 2021 1:57 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , русский, Français, Español, українська, English
Pikantsary ahitàna an'i Liza, ilay toerana fitrandrahana solika ao amin'ny faritra Stabroek izay ny ExxonMobil no mitrandraka ny ampahany betsaka, nosintonina avy amina lahatsary nanaovana topîmaso manontolo ny faritry ny ranomasina ao Goiàna, navoaka tamin'ny 2017 tao amin'ny fantsona Youtube an'ny “Hess Corporation”. Tafiditra ho isan'ny anton'ny ady sisintany ifanaovan'i Venezoelà sy Goiàna io toerana fitrandrahana io.
Nihamafy ny fifampihenjanana pôlitika eo amin'i Goiàna sy Venezoelà amin'ilay ady sisintany efa naharitra ela mahakasika ireo faritra miaty ny roa ampahatelon'ilay firenena kely anglo-saxonne any Amerika Atsimo. Ny faritra resahana eto dia ilay faritany manankarena ao Essequibo, toerana izay nanombohan'ilay goavambe amin'ny resaka angovo ExxonMobil nanao fitiliana solika tamin'ny 2008. Tsy ela akory izay no nahitan'ity orinasa ity tahirin-tsolika goavana sy entona ao Goiàna, mametraka io firenena io ho eo an-tokonam-baravaran'ny firoboroboana ara-toekarena.
Ny 9 Janoary, nambaran‘ny filoha venezoeliàna, Nicolás Maduro, fa ao anatin'ny fikasàny ny « haka indray » ilay faritany, izay any andrefan'ilay onibe ao Goiàna, ny Essequibo. Na eo aza ny harena ananan'ilay faritany, toy ny volamena, ny diamondra sy ny hazo, dia ny any an-dranomasina no anton'ny fitakian'i Venezoelà — Liza, ilay faritra misy ny toerana fitrandrahana solika iasan'ny ExxonMobil, izay naminavinàn'ilay orinasa fa mety hamoahany 120.000 barilan-tsolika isanandro. Tao anatin'ny fanolorany ilay tetikasa, faritan'ny ExxonMobil ho toy ny tafiditra ao anatin'ny faritra Stabroek izy io ary nomeny anarana hoe « ny toerana voalohany fitrandrahana solika an-dranomasina any amin'ny ranomasin'i Goiàna ».
Ny nahitàna ireo loharanon-tsolika sy entona ao Goiàna dia nahatonga ilay firenena ho mpisehatra iray vaovao eo amin'ny indositrian'ny angovo erantany, raha i Venezoelà kosa efa tsara fototra ao anatin'ilay tsena. Na ohatra aza i Venezoelà manana ny betsaka indrindra amin'ny tahirin-tsolika eto ambonin'ny tany; misy 300 miliara barilan-tsolika, ambavahaonan'ny olana sosialy sy toekarena ilay firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tamin'ny 2017, nihamafy ilay olana, taorian'ny tsy nankatoavan‘ny Fitsaràna Antampony tao amin'io firenena io ny antenimieram-pireneny.
Tamin'ny 2019, namoaka didy ny filoha Maduro mba hanenjehana eny amin'ny fitsaràna ilay mpitarika ny mpanohitra, Juan Guaidó. Resaka famadihana tanindrazana noho izy nihemotra tsy nitaky ny fiandrianampirenen'i Venezoelà ao amin'ny faritanin'i Essequibo no iampangany azy. Eo am-piomanana hanao ny fitokanana amin'ny 5 Janoary ny antenimiera mpomba an'i Maduro, izay ametrahan'ny mpanohitra fanontaniana ny maha-ara-drariny azy, no mitranga io tsindry vaovao ataon'i Venezoelà io.
Etsy andaniny, ny filohan'i Goiàna, Irfaan Ali, dia namaritra ireo fitakian'i Maduro ho toy ny « tsy misy eo anatrehan'ny lalàna », tamin'ny fanamarihana fa :
Taorian'ny fanazarantena ara-tafika niarahan'ireo mpiandry sisintany ao Goiàna tamin'i Etazonia, natao tamin'ny 8 Janoary, tonga tany Goiàna ny Amiraly Craig Faller, lehiben'ny fibaikoana ny andiany amin'ny faritra atsimo ao Etazonia ny 11 Janoary teo hanao fitsidihana nandritra ny 3 andro, marika entina milaza fa tena mifanaraka amin'ny an'i Goiàna ny eritreritry ny fitantanan'i Trump izay vao avy nandao ny toerany tsy ela akory.
I Venezoelà, izay mpiaramiombona antoka akaiky fahiny, dia ratsiratsy fifandraisana amin'i Etazonia hatramin'ny 1998 nahalany ilay filohampirenena sôsialista, Hugo Chávez. Tamin'ny 2018, nambaran‘ny minisitry ny raharaha ivelany ao Venezoelà fa ny fidiran'i Etazonia amin'io raharaha io dia midika « fitsabatsabahana amin'ny tokantranon'ny hafa ».
Famahàna am-pilaminana ny olana, amin'ny alàlan'ny resaka lalàna, no dradrain'i Sarah-Ann Lynch, masoivoho amerikàna ao Goiàna :
Efa hatry ny ela i Etazonia no nangataka mba ho am-pilaminana ary amin'ny fanaovana dingana araka ny lalàna no hamahàna ny ady sisintany ifanaovan'i Goiàna sy Venezoelà, ary hamafisinay io antso io androany.
Tamin'ny Jona 2020, nentina teo amin'ny tribonalin'ny Fitsaràna Iraisampirenena (CIJ), izay rantsana fototra iray ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny fifanolànana ara-pitsaràna, ny raharaha. Tsy mitsahatra ny mandà tsy handray anjara amin'ireo dingana ao amin'ny CIJ i Venezoelà, sady manazava fa aleony amin'ny làlan'ny fifandresena lahatra eo amin'ny roa tonta no hamahàna ny fifandirana.
Jorge Rodriguez, minisitra nisolo an'i Guaidó ao amin'ny parlemanta venezoeliàna, toa niampanga ny mpanohitra ho mifandray tendro amin'ny CIJ mba hamoahan'ity farany didy manome tombony an'i Goiàna ao anatin'izao ady sisintany izao.
Na teo aza ny ezaky ny ExxonMobil hanohy ny asany toy ny andavanandro, nisy tranga vitsivitsy izay nisamboran'ireo sambo venezoeliàna ny sambon-dry zareo ka nandroahana azy ireny hivoaka ny faritra, tamin'ny filazàna fa tao amin'ny faritra tsy eo ambany fifehezan'i Goiàna no nisy azy ireo.
Tany aloha tany ny (CARICOM) – vondrompirahamonin'ireo ao Karaiba – dia naneho ny fahavononany « hanampy an'i Venezoelà sy Goiàna amin'ny famahàna ity olana ity » ary nisisika tamin'ny hoe aleony “vahaolana am-pilaminana” no ivoahana amin'io kizo io. Ny 14 Janoary, ny filoha vaovaon'ny CARICOM, ny praiminisitra ao Trinité-sy-Tobago, Keith Rowley, no hitantana ny kaonferansa virtoaly hataon'ireo firenena mikambana ao, saingy ho hita eo raha toa ho isan'ny resaka voalahatra hatao ao ity ady sisintany ity.